Instagram – AsiaApps
Instagram ကို အချိန် ဘယ်လောက်ထိ သုံးထားလဲ သိနိုင်မယ့် Update အသစ်
November 15, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Instagram ကို အချိန် ဘယ်လောက်ထိ သုံးထားလဲ သိနိုင်မယ့် Update အသစ်
ကိုယ့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ တစ်နေ့တာ အချိန် ဘယ်လောက်ထိ ကုန်ဆုံးစေမိနေပြီလဲဆိုတာကို သိရှိစေမယ့် feature ကို Android9pie update နှင့်အတူ DigitalWellbeing app ရဲ့ beta ဗားရှင်းမှာ…
၆၀ မိနစ်စာဗီဒီယိုတွေကို Support လုပ်သွားနိုင်ခြေရှိတဲ့ Instagram
June 8, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on ၆၀ မိနစ်စာဗီဒီယိုတွေကို Support လုပ်သွားနိုင်ခြေရှိတဲ့ Instagram
Wall Street Journal ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ Instagram ဟာလာမယ့်အချိန်ကာလမှာ ၆၀ မိနစ်စာရှိတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို Support လုပ်သွားနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိ Instagram မှာ ဗီဒီယို support လုပ်နိုင်တဲ့ကြာမြင့်ချိန်ဟာ ၆၀ စက္ကန့်အထိသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။…
Android device တွေမှာ app crash bug ကိုအသိအမှတ်ပြုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ Instagram
June 7, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Android device တွေမှာ app crash bug ကိုအသိအမှတ်ပြုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ Instagram
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က Android device မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Instagram user တွေဟာ အသုံးပြုနေရင်း သူတို့ရဲ့ Device ကို Crash ဖြစ်စေတယ် ဆိုပြီး Instagram ရဲ့ Supporting အဖွဲ့ကို report…
တစ်နေ့ကို Instagram မှာ မမြင်ချင်လောက်အောင် Post တွေအများကြီးတင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမှာရှိနေပါသလား ? (သို့) Instagram မှာမမြင်ချင်ပေမယ့် အားနာလို့ Unfollow မလုပ်ရတဲ့အခြေအနေ မိတ်ဆွေကြုံတွေ့နေပြီလား ? ဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေထဲက တစ်ခုခုကို မိတ်ဆွေရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တော့… ဘာလို့လဲဆိုတော့…
Version အသစ်မှာ “Emoji Slider” နဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Instagram
May 14, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Version အသစ်မှာ “Emoji Slider” နဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Instagram
Instagram ဟာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းအငယ်ကပဲ version အသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ပြီး “Emoji Slider” ဆိုတဲ့ Sticker တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Emoji slider ကတော့ Poll-type sticker မျိုးဖြစ်ပြီး My story မှာ rating တောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။…
Jiff Pom က လူမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ IG (Instagram) ရဲ့ ကြယ်ပွင့် ခွေးလေးတစ်ကောင်ပါ။ ခွေးဆိုပြီးတော့ တော့ အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့နော်။ သူ့ရဲ့ ကံဇာတာက မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို ထူးကဲပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ facebook…
Instagram ပေါ်မှာ video call တွေခေါ်ဆိုနိုင်တော့မယ်
May 3, 2018 May 3, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Instagram ပေါ်မှာ video call တွေခေါ်ဆိုနိုင်တော့မယ်
Facebook က မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ F8 conference မှာ Instagram ရဲ့ “video chat” နဲ့ “Explore Page” feature အသစ်နှစ်ခုအကြောင်းကို ချပြခဲ့ပါတယ်။ Explore…